ဝေနှောင်းလွင်: ညောင်ရမ်းခေတ်သွင်းစာများ (၁၆)
Posted by ဝေနှောင်းလွင် on Tuesday, May 10, 2011 at 3:29 AM
မြို့ကို ကျယ်အောင်ချဲ့လျှင် သင့် မသင့် သိလိုပါသည်။
နန်းမြို့တော်ကို အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်နှစ်တာစီတိုး၍ ချယ့်မည်အကြံတော်ရှိသည်။ စက်တော်ခေါ်ရာတွင် မြင်မက်တော်မူသည်။ တခုသောတောင်ကို အမြစ်ပေါ်အောင်တူးစေသည်။ အမြစ်မပြတ်နိုင် ခိုင်ခံ့မြဲမြံသည်။ ဤအရာများသည် ပြောင်းချီသော်လည်းကောင်း၊ ချယ့်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်း ၂-ပါးသည် အယူတော်အသို့ရှိမည်နည်း။ ကျယ်သည်အရာကိုသာ မခြုန်းသင့်၊ ကျည်းသည်အရာကို ကျယ်အောင်ချယ့်ခြင်းသည် သင့်ပါမည်လော။ လောကဓမ္မမှုကို သိသာအောင် မိန့်တော်မူပါဆရာတော်။ ။
(သပြေလှစား၊ ကြာပန်းညိုစားတို့ကို စေတော်မူသည်။)Show/Hide
ဘိုးတော်ညောင်ရမ်းမင်းသည် ဌာဝရကိန်းနှင့်တည်ထားသောမြို့တော် နန်းမြို့တော်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်ကို ချယ့်သော်လည်းကောင်း၊ နန်းမြို့တော်ကို ချယ့်သော်လည်းကောင်း ဌာဝရကိန်းခန်းမပျက်ချေပြီလော။ ဌာဝရကိန်းခန်းပျက်ချေက သန်လျက်ခုံတွင် လာလတံ့သောမင်းတို့လက်ထက် ဟိမ၀န္တာဖြစ်ချေတုံ၊ နန်းနေဖြစ်ချေတုံ၊ ရန်မျိုးအပေါင်းတို့သည် မပုံန်ခဲ့ပြီလော။ အိမ်မက်တော်ကပင် တောင်ခြေကိုတူးသည်။ အမြစ်မပြတ်နိုင်ရှိသောအရာကို မြင်မက်တော်မူရင်းကပင် ဌာဝရကိန်းမပျက်မပြတ်သောအရာသည် ကောင်းသောနိမိတ်ပင် ယူရမည်။ ဌာဝရကိန်းကိုစောင်ကုန်သောသမ္မာဒေ၀တို့သည် သုပိနကိုမြင်ချေသည်။ ရှေးထုံးစံကို စုံစမ်းသော် မဟာသမတမင်းအဆက်စေတီယမင်းသည် မဟာသမတမင်းတို့နေသော မြို့နန်းကို ချယ့်၍တည်သည်။ ခြုံး၍တည်သည်။
နန်းမြို့တော်ကို ခြုံး၍တည်သည်၊ ချယ့်၍တည်ပြန်သည်အရာများကိုလည်း ရှေးပညာရှိတို့မကြိုက် ဆိုကုန်သည်။ ဌာဝရကိန်းရမြို့ရာကလွဲ၍ မြို့နန်းမြို့များကို ဇင်္ဂမကိန်း၌ တည်ထောင်သည်ဖြစ်မူကား ဌာဝရကိန်းမဟုတ်သောကြောင့် တည်ပိုင်သည်၊ ဖျက်ပိုင်သည်။ ပုဂံမြို့၌ သက္ကရာဇ် ၃၂၂-ခု တပိုတွဲလပြည့်ကျော် ၁၂-ရက်နေ့ ကွမ်းထမ်းမင်းရာဇာလက်ထက် နန်းမြို့ကို အနောက်မြောက်၊ တောင်မြောက်က ကျည်းသည်ဟူ၍ချယ်၏။ အလောင်းစည်သူလက်ထက်လည်း မင်္ဂလာတံဆိပ်တံခါးကို ရွှေ၍ မြိုးရိုးချယ့်ပြီးလျှင် ထိုတံခါးနှင့်ဆီထည့်တံခါး စီရင်ချေ၏။ ထိုသို့စီရင်သောအရာ ဌာဝရကိန်း၊ ဇင်္ဂမကိန်းများနည်း စီရင်ပြန်သောအရာတို့ကို ပညာရှိတို့မကြိုက်ဆိုသည်များကိုလည်း ထိုဆရာများ ပြောဆိုသည့်စကားကို ကြားဖူး၏။ တည်ရင်းနန်းမြို့ခြေရင်းတွင် ကျုံးစီရင်၍ နန်းမြို့တည်ပြန်လျှင်လည်း သင့်ရာ၏။ နန်းမြို့တော်ကို ချယ့်တော်မူမည်ကြံတော်မမူသင့်ချေ။
တက်သစ်သောနေမင်းကဲ့သို့ဖြစ်သောမင်းဧကရာဇ်တို့၌ ဌာဝရကို ယာယီမဖြစ်စေသင့်။ ဌာဝရအရာကို ဌာဝရ၊ ယာယီအရာကို ယာယီစီရင်မှသင့်မည်။ မြို့တည်ရင်းကစီရင်သော မဟာယတရာကြီးများသည် ခမည်းတော် လက်ထက်လည်းကောင်း၊ ဘကြီးတော်လက်ထက်လည်းကောင်း အယိုအယွင်းမရှိလေ။ ရေမြေရှင်လက်ထက်မှာမှ အထူးမဖြစ်စေသင့်ထင်သည်။ နန်းမြို့တော်ဗဟိုစင် နာရီမောင်း တန်ဆောင်း ကျောင်းရာ သိမ်ရာ နန်းတော်ရာ လွှတ်ရာ ရှေ့ရုံး နောက်ရုံးများလည်း ဌာဝရဖြစ်သည်၊ ပျက်စေ၍မသင့်။ ဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက် ဘိုးတော်လည်း အဆင်အခြင် အစူးအစမ်း အထောက်အထား အယူအငင် ထိုးထွင်းလှသောမင်းမြတ်ဖြစ်သည်။ စီရင်သောဆရာလည်း ဘားမဲ့အကျော်အာစာရသူမြတ် မြတ်မုနိ သင်္ဃရာဇာတို့ကို ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းအပြင်ဝယ် မဟာယတရာနှင့်စပ်သည်ကို အတုမရှိဖြစ်သည်။ အဟောင်းကို မပြောင်းသင့်ပြီ။ ထပ်၍အသစ်စီရင်တော်မူလိုသော်ကား သင့်၏။ ဆရာတော်ယူသည်။ ဤဘဒ္ဒကပ် ကမ္ဘာထက် ကောက္ကသံဘုရားပွင့်တော်မူသော မဟာဗောဓိပင်ရွှေပလ္လင် သတ္တဌာနအရာ ကောဏဂုံဘုရား၊ ဂေါတမဘုရား၊ အရိမိတေယျဘုရား ၅-ဆူတိုင်အရာမပြောင်း အဟောင်းရာတွင်သာ ပွင့်တော်မူသည်များကို၊ ကျမ်းဂန်လာသည်များကိုထောက်၍ ဆင်ခြင်ကောင်းသောအကြောင်းတို့ကို ဆင်ခြင်သင့်သည် မဟာဓမ္မရာဇ်။ ။
(သက္ကရာဇ် ၁၀၁၇-ခု၊ နယုန်လ္ဆန်း ၇-ရက်နေ့၊ တောင်ဖီလာပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ဆရာတော်ဘုရားက သွင်းသည်။)
classic book (32)
အခါခပ်သိမ်း ကိလေသာမီး တောက်လောင်နေသူများ ဖြစ်လျက် အဘယ်ကြောင့် ပျော်မြူးရယ်ရွှင်ခြင်း ဖြစ်ဘိ သနည်း ။ အဘယ့်ကြောင့် နှစ်လိုဝမ်းသာခြင်း ဖြစ်ဘိ သနည်း။ အ၀ိဇ္ဇာအမိုက်မှောင်ကြီးဖြင့် ပိတ်ဆီးနေသူများ ဖြစ်ပါလျက် အဘယ်ကြောင့် ပညာတည်းဟူသော ဆီမီးကို မရှာဘဲ နေကြကုန်သနည်း ။
သမိုင်းသည် လူတို့၏နေထိုင်ပုံ ကျင့်သုံးနည်းခေတ်ကို ပြန်လည်ပြသရာရောက်သည်။ တနည်းဆိုရသော် ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အဆိုးအကောင်းတွေကို အနာဂတ်လူသားတို့၏ နှလုံးသားမှာ ခွဲခြားဝေဖန် ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ရာဇ၀င်သမိုင်းကို ကောင်းကောင်းလေ့လာပြီး သုံးသပ်တတ်ရင် လူတွေအကြောင်းကို နောကြေအောင်သိလာမယ်။ နိုင်ငံရေးကို ကျွမ်းလာမယ်။ (အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား)
တစ်ဦးတစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးလျက် ရွှင်မြူးဝမ်းသာ လက်တွဲကာဖြင့် မများဒုစရိုက် အမိုက်ကင်းကွာ ပြည်မြန်မာ သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေ
Old wood to burn, old wine to drink, old friends to trust and old authors to read. [Bacon] သစ်ဟောင်းက ထင်းဆိုက်လို့ ကောင်းတယ်။ အရက်ဟောင်းက သောက်လို့ ကောင်းတယ်။ မိတ်ဟောင်းက ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကောင်းတယ်။ စာရေးဆရာဟောင်းတွေရဲ့ စာကတော့ ဖတ်လို့ အလွန်ကောင်းတယ်။ (ဘေကွန်) The chief glory of every people arise from its authors. [Johnson] လူသားတို့၏ ဂုဏ်ကျက်သရေသည် သူတို့လေ့လာဖတ်ရှုသော စာရေးဆရာတို့ထံမှ ပေါ်ထွန်းလာရသည်။ (ဂျွန်ဆင်) Biography is the most universally pleasant and profitable of all reading. [Carlyle] အတ္ထုပ္ပတ္တိစာပေဟာ စာပေထဲမှာ နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး အကျိုးအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ (ကာလိုင်း)
အိုးဖုတ်ရင်း မိုးချုပ်သွားသူများ (၃)
အနီထည် အချိုးကျတဲ့ မြေနီရောင် အိုးလှလှလေးပေါ်မှာ နေကြာ, ဒေလီယာ ဂန္ဓ္ဓမာ ပန်းရောင်စုံကို စိတ်ကူးပုံစံတေ...
ညောင်ရမ်းခေတ်ဦးတွင် စိုးစံခဲ့ကြသော ညောင်ရမ်းမင်းတရား၊ အနောက်ဘက်လွန်မင်းနှင့် သာလွန်မင်းတို့သည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်ြ...
မြို့ကို ကျယ်အောင်ချဲ့လျှင် သင့် မသင့် သိလိုပါသည်။ ရေမြေ့ရှင်လျှောက်သည်ဆရာတော် --- နန်းမြို့တော်ကို အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်နှစ...
တိုက်ခုနှစ်တိုက် နေရာဌာနအပိုင်းအခြားကို ရှင်းပါရန်။ ရေမြေ့ရှင်လျှောက်သည်ဆရာတော်--- မဇ္ဈိမဒေသဟူသော ပါဒလိပုဗ္ဗပူရကိုအစိုးရသောသီရိဓမ္မာ...
ပထမ ဒုတိယ တတိယသင်္ဂါယနာတင်ချိန်တို့၌ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားသည့်မြို့ရွာစာရင်းကို သိလိုပါသည်။ ရေမြေရှင်လျှောက်သည်ဆရာတော် --- သက္ကရာဇ် ကလိယုဂအတိ...
အိုးဖုတ်ရင်း မိုးချုပ်သွားသူများ (၂)
ကျိုက်ကေသာ ရွှေဆံတော်ဘုရား တောင်မြေကို ဖိုထဲမှာ နှစ်ပေါက်အောင် သိုလှောင်ထား ကမ်းနားမြေနက် မွမွကို ရေ...
စဘော်,စရံ…ဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်ရဲ့ အသံကိုကြောက် အပျောက်,အပြတ်နဲ့ အောက်ထပ်,အပေါ်ထပ်ကိစ္စ သူ, စိတ္တဇဖြစ်နေတာ ကြာ...
ထီးနန်းပြောင်းလဲရခြင်း၊ တိုင်းနိုင်ငံ၌ ဘေးဆိုးကျရောက်ခြင်းနှင့် စစ်မက်ထူပြောခြင်းဖြစ်စေသော ကိန်းခန်းဓာတ်တို့ကို သိလိုပါသည်။ ရေမြေရှင်လျှော...
စည်၊ တပိုး၊ အောင်လံ၊ ဆောင်လံနှင့်ထီးဖြူတော်တို့တွင် အင်းချ၍ ဂါထာဆောင်နတ် ရုပ်ရေးမြဲထုံးနည်းကို သိလိုပါသည်...
မည်သည့်အခါ သက္ကရာဇ်ဖြိုကိန်းရောက်ပါမည် သိလိုပါသည်။ ရေမြေ့ရှင်လျှောက်သည်ဆရာတော်--- ကောဇာသက္ကရာဇ်ကို ဘေးတော် မိုးညှင်းမင်းတရားဖြိုသောခါ ...
၁၉၈၃၊ အောက်တိုဘာလ (၂၄)ရက် အဲဒီနေ့မှာ မျက်ရည်မရှိဘဲငိုခဲ့ရတယ်။ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက်မှာ အပ်ကြောင်းအထပ်ထပ်သာ တွေ့ရတယ်။ တစ်နှစ်စာအချိန်နဲ့ငွေကြေးကို ဖြုန်းတီးလိုက်ခဲ့ပေမယ့် ရေရာတာတစ်ခုမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ဘ၀စာမျက်နှာတစ်ချို့ကို နှလုံးသားနဲ့ထုဆစ်ခဲ့ပေမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ ဒီနေ့အချိန်ထိ ဦးနှောက်မှာပေါ်မလာသေးဘူး။ မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင်မှာ တိတ်တဆိတ်ငေးမောရင်း မျှော်လင့်လို့မရတဲ့ မျှော်လင့်ချက်အထပ်ထပ်ကို ကောက်ချက်ဆွဲကြည့်နေဆဲပါပဲ။ သုညတစ်လုံးထက်ပိုပြီး မမျှော်လင့်ရဲတော့တဲ့ဘ၀မှာ သုဿာန်မြေက မီးသင့်ထင်းတစ်ချောင်းကိုပဲ မြတ်နိုးမိတယ်။ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်တစ်နေ့မှာ သားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်ရချင်တယ်။ တကယ်လို့များ … နောင်ဘ၀မှာလူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ချင်တယ်။
Copyright © ဝေနှောင်းလွင်